आर्यघाटमा पनि कमिसनको खेल ! – Peacepokhara.com
आर्यघाटमा पनि कमिसनको खेल !
काठमाडौं २७ माघ । पशुपतिस्थित आर्यघाटमा दाहसंस्कार सामग्री खरिदमा कमिसनका लागि आलोपोलो प्रणाली लगाइएको छ । दाहसंस्कार गर्दा आवश्यक पर्ने बाँस, फूलमाला, दाउरा, कात्रो, पीताम्बरलगायत सामग्री खरिद मृतकका आफन्तको चाहनानुसार नभएर पालोअनुसार तोकिएका पसलमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
शोकमा परेका आफन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीले दाहसंस्कार सामग्री ‘फलानो पसलबाट किन्नुस्’ भन्दै पसल तोकिदिने गरेका छन् । शोकमा परेका बेला कसैले केही नबोल्ने हुँदा त्यसको फाइदा लिन कर्मचारीको मिलेमतोमा आलोपालो प्रणाली लगाइएको खुलेको छ ।
माघ १९ गते कुपण्डोलका विष्णु खड्कालाई दाहसंस्कारका लागि आर्यघाट पुर्याइयो । दाहसंस्कारका लागि सुरुमा कोषको कार्यालयमा वातावरणीय शुल्क तथा जलाउनेको ज्यालासहित २८ सय रुपैयाँ तिरेर नाम दर्ता गरे आफन्तले । दर्तापछि कोषका कर्मचारी शम्भु पौडेलले भने, ‘यो चिट लिएर सामान किन्न पारीको पसलमा जानुस् ।’ मृतक खड्काका आफन्त सामग्री किन्न चिट बोकेर ब्रह्मनाल पारीको घाटसेवा पसलमा पुगे ।
सोही दिन मृत्यु भएकी मैया कुँवरका आफन्तले पनि शव घाटमा पु¥याएपछि कोषको कार्यालयमा गएर २८ सय बुझाई नाम दर्ता गराए । त्यसपछि मृतक कुँवरका आफन्तलाई कोषका कर्मचारीले पसल देखाउँदै भने, ‘यो चिट लिएर त्यहाँ जानुस् ।’ आफन्त चिट बोकेर किरियापुत्री घरसँगै रहेको पशुपति सेवा उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडमा दाहसंस्कार सामग्री किन्न गए ।
कोषका कर्मचारीले मृतक खड्का र कुँवरका आफन्तलाई मात्रै होइन, आर्यघाटमा ल्याइने सबै मृतकका आफन्तलाई यसैगरी पसल तोकेर दाहसंस्कार सामग्री खरिद गर्न पठाउँछन् । कोषबाट दिएको चिट बोकेर मृतकका आफन्त कोषका कर्मचारीले तोकेको पसलमा पुगेर चिट छोडेपछि कोषबाट शव जलाउन खटिएका व्यक्तिले दाहसंस्कार सामग्री लिएर आउँछन् । स्रोतका अनुसार शव जलाउने र पसललेले मिलेर बिलमा थप सामग्रीसमेत जोड्छन् । शोकमा परेका मृतकका आफन्तले कति र कुन सामग्री लाग्छ भनेर ध्यान नदिने हुनाले अनावश्यक सामग्री पनि आवश्यक छ भनेर बिलमा चढाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
दाहसंस्कारपछि मृतकका आफन्त पसलमा गएर बिलअनुसार सामग्रीको भुक्तानी गर्छन् । नागरिकलाई प्राप्त भुक्तानी बिल हेर्दा दुईतिरै फरक मूल्य देखिन्छ । सहकारी पसलमा प्रतिमाको मूल्य २५ रुपैयाँ छ भने त्यसैलाई निजी पसलले दुई सय रुपैयाँमा बेच्दै आएको बिलबाट देखिन्छ । आर्यघाटमा दाहसंस्कार सामग्री बेच्ने सहकारी र निजी गरी दुइटा पसल छन् । सहकारी पसलले फूलमाला ४० रुपैयाँमा बिक्री गर्छ भने निजीले ६० रुपैयाँ लिएको नागरिकलाई प्राप्त माघ १९ गते काटेको बिलमा उल्लेख छ । सहकारी पसलले एक मुठा दाउराको ६० रुपैयाँ र निजीले ७० रुपैयाँ, सहकारीले बाँस ७० र निजीले ९० रुपैयाँ, चार मिटर कात्रो कपडा सहकारीले दुई सय र निजी पसलले तीन सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् । नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
peacepokhara 15 Apr 2016
कन्डम छाडेर खाने औषधि
peacepokhara 01 Dec 2014
कैदी सरुवामा लाखौं खर्च !
peacepokhara 15 Feb 2016